अरेबियन महिलाहरु किन यती सुन्दर र कामुक हुन्छन् ? यस्तो छ रहस्य ! - नेपाली खोज
अरेबियन महिलाहरुको छाला अन्य देशका महिलाहरुको तुलनामा धेरै सुन्दर र स्वस्थ्य हुन्छ । यी महिलाहरुको छाला मात्र हैन कपाल पनि उत्तिकै सुन्दर हुन्छ ।
सुन्दरताको कुरा गर्दा अरबेयिन महिलाहरुको प्रसंग जोड्ने गरिन्छ । हुनपनि बान्की मिलेको अनुहार, छालाको चमक, आँखाको तेज, मुलायम एंव रसिलो ओंठ आदिले उनीहरुको सौन्दर्य खुल्ने गर्छ ।
सवैले स्विकारेका छन् कि, अरेबियन महिलाहरुको छाला अन्य देशका महिलाहरुको तुलनामा धेरै सुन्दर र स्वस्थ्य हुन्छ । यी महिलाहरुको छाला मात्र हैन कपाल पनि उत्तिकै सुन्दर हुन्छ ।
अरेबियन महिलाहरु ठुला आँखा र आकर्षक हेराइका कारण पनि प्रख्यात छन् । यी महिलाहरु धेरैजसो बुर्का भित्र रहन मन पराउँछन् । तर नकाबमा भित्रबाट देखिएको सुन्दर आँखाले नै उनीहरुको सुन्दरताको बयान गर्छ । अरेबियन महिलाको सुन्दरता प्राकृतिक मात्र नभएर आफ्नो छालाप्रतिको हेरचाह पनि प्रमुख कारण हो ।
म्याग्दी बन्यो कोरोनामुक्त जिल्ला
चिरान सालका काठ सहित ११ पक्राउ